Thomas Ruth Airbus 330 MRTT N'elu Panel anaghị arụ ọrụ
Thomas Ruth Airbus 330 MRTT N'elu Panel anaghị arụ ọrụ 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1080
M ebudatara mbipụta ọhụrụ nke Thomas Ruths Airbus 330 MRTT ka enwere m nwa nwanyị bụ FO na RAAF ma gbapụ.
Enweghị m ike ịnweta ogwe aka n'elu. Ọ dị mma, ọbụlagodi na m na-egwu banyere m ka na-enweghị ike ime ka ọ rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na m na-ele ihe mgbochi isi, m ga-enweta 321 panel na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na m na-eji A igodo ịkwaga n'elu ọdụm ahụ, m ga-enweta usoro ziri ezi nke nwere ngbanwe maka bọtịnụ na-agbapụta ma ọ dịghị ihe na-arụ ọrụ na panel a. Amaghi ihe kpatara ya ma juo ma onye obula nwere echiche
E nwekwara ụzọ mkpirisi dị iche iche ga-agbatịkwu ume mkpuchi